आइसोलेसनबाट घर पठाइएका युवकद्वारा आत्महत्या- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
असार २३, २०७७ माधव अर्याल
पाल्पा — कोरोनामुक्त भएर घर फर्किएका रम्भा गाउँपालिका–४, हुमिनका २० वर्षीय युवकले सोमबार राति आत्महत्या गरेका छन् । लुम्बिनी मेडिकल कलेजको आइसोलेसन कक्षमा १५ दिन बसेर फर्केकै दिन उनले आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेको वडाध्यक्ष भोजबहादुर विकले बताए ।
२८ दिनसम्म गाउँकै क्वारेन्टाइनमा बसेर कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा राखिएको थियो । उनी एक महिनाअघि भारतको मुम्बईबाट घर फर्केका थिए । २८ दिनसम्म विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा १५ दिन अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका थिए ।
रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो गाइडलाइनअनुसार आइसोलेसनमा बसेको १५औं दिनमा उनलाई घर पठाइएको थियो ।
प्रकाशित : असार २३, २०७७ १२:४१
असार २३, २०७७ प्रकाश बराल
बागलुङ — गलकोट नगरपालिकाको डाँडाखेतदेखि वडा नम्बर ४ को कार्यालय हुँदै बरेङ र गुल्मीको शान्तिपुर जान रणनीतिक सडकको ट्रयाक खुलेको ५ वर्ष पुग्यो । ट्रयाक खुलेपछि यो सडकमा कसले लगानी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । वडा नं. ४ को कार्यालय सम्म पुग्न नगरपालिकाले ६० लाख लगानी गर्‍यो । एक किलोमिटर सडक कालोपत्रसमेत बनेको छ । त्यसपछि अन्य खण्डमा दुई वर्षदेखि लगानी शून्य छ ।
ट्रयाक खुलेपछि लगानी अभावमा अलपत्र परेको बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ देखि गुल्मीको शान्तिपुर जाने रणनीतिक सडक । तस्बिर : प्रकाश बराल/कान्तिपुर
नगरपालिकाले गौरवको आयोजना भन्दै पहिलो वर्ष लगानी गरेपछि रणनीतिक सडक भएकोले लगानी थपेन । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट नआएपछि १ किमी खण्ड कालोपत्र भएपनि अहिले अलपत्र छ । नगरपालिकाले गौरवको आयोजना रद्द गरायो । वडाले पनि उक्त सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
डाँडाखेतदेखि खरुवा मावि, चमुवा हुँदै नुवाकोटतर्फ जाने यो सडक नगरपालिकाकै चक्रपथमा पनि सूचीकृत छ । गत वर्ष चक्रपथकै ट्रयाकमा बस चलाउने निधोसमेत भयो । केही दिन चलेर यो सडकमा बस चल्न सकेनन् । चक्रपथ निर्माणमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएन । अहिले यो सडकको अधिकांश खण्ड जीर्ण भइरहेको वडा अध्यक्ष बलबहादुर खत्रीले बताए ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र सांसद विकास कोषको झन्डै ३ करोड लगानीपछि २० किमी ट्रयाक खोलिएको यो सडक गुल्मी जोड्न सबैभन्दा छोटो छ । दुई पालिका र दुई प्रदेश जोड्ने सडकलाई संघीय सरकारले लगानी गर्ने नीति बनेकोले नगरपालिकाले लगानी नगरेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ‘दोहोरो लगानी भयो भने आर्थिक अनियमितता हुन्छ भनेर लगानी गरेनौं,’ गैरेले भने, ‘यो सडकको सुधार गर्न न संघले हेर्‍यो, न प्रदेशले लगानी गर्‍यो ।’ नगरपालिकाले बढीमा ४५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न सक्ने उनले बताए ।
उक्त सानो बजेटले कालोपत्र गर्ने, चौडा सडक बनाउने काम सम्भव नहुने भन्दै परिषदमा चर्चा उठेपछि रकम विनियोजन रोकेको उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताइन् । ‘रणनीतिक सडकमा स्थानीयले लगानी गरेर पार लगाउन सकिँदैन, प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश र संघमा पठाएको सम्बोधन भएको छैन,’ काउचाले भनिन्, ‘वडा कार्यालयसमेत भएकोले धेरै मानिसले यात्रा गर्नुपर्छ, सास्ती पनि भएको छ ।’ गतवर्ष निर्माण थालिएको वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले १६ लाख विनियोजन गरेको उनले बताइन् । वडा कार्यालयसमेत संरक्षण गर्नेगरी चमुवा खोलामा कल्भर्ट निर्माण गर्न पनि २० लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त कल्भर्टले रणनीतिक सडकका लागि पुलको कामसमेत गर्नेछ ।
वडा गौरवको योजना भन्दै दुई वर्षअघि नै वडा नं. १ र ९ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न विनियोजन भएको १ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । वडाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि उक्त रकम फ्रिज भएको थियो । वडा नं. २ ले मात्र गौरवको योजना अन्तर्गत सभाहल निर्माण गरेर सातौं नगर परिषद र बजेट सार्वजनिकीकरण समेत सम्पन्न गरेको छ । अरु वडाले काम गर्न नसकेपछि गौरवका योजनामा लगानी नगरिएको गैरेले बताए । ‘अब वडा वडामा हैन, नगरका एकदुईवटा मात्रै गौरवका योजना बनाएर पूरा गर्ने लक्ष्य बनाइयो,’ उनले भने,‘वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडकमा मात्र नगरले लगानी गर्छ, अन्य पालिकामा जोड्ने सडक विभाग र संघीय सरकारकै ध्यान जानुपर्छ ।’ गलकोटले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणलाई गौरवको योजनामा समेटेको छ । २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर आगामी वर्ष नगरले भवन बनाउने भएको हो । त्यसबाहेक सहरी विकास कार्यक्रमका लागि पनि २ करोड ८५ लाख बजेट छुट्टयाएको छ । नगरपालिकाले वडा नं. १० को रमुवा सडक स्तरोन्नतीका लागि ५० लाख, हटिया बजार ढलान गर्न ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित : असार २३, २०७७ १२:३७